प्रहरीसँगको दोहोरो भीडन्तमा मारिए यी ‘मोस्ट वान्टेड’ अपराधी, कसरी भयो घटना ? — Imandarmedia.com
आज : २०७५ चैत्र ५ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
प्रहरीसँगको दोहोरो भीडन्तमा मारिए यी ‘मोस्ट वान्टेड’ अपराधी, कसरी भयो घटना ?
काठमाडौं । विभिन्न फौजदारी मुद्दामा प्रहरीको मोस्ट वान्टेड सूचीमा रहेका एक कुख्यात अपराधी प्रहरी इनकाउन्टरमा मारिएका छन्।
शनिबार राति तस्करी हुन लागेको सूचनाको आधारमा प्रहरीले नाकामा चेकजाँच गर्ने क्रममा प्रहरी उपर फायरिङ्ग गरेपछि विभिन्न मुद्दामा फरार रहेका सिद्धार्थनगर नगरपालिका ६ का केदार साहानी प्रहरी इनकाउन्टरमा मारिएको प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएको हो।
रुपन्देहीका एसपी हृदय थापालेका अनुसार मोटरसाइकल आएका दुई व्यक्तिले एकाएक प्रहरी उपर फायरिङ्ग गरेपछि जवाफी कारबाहीमा साहानी मारिएका हुन्। मोटरसाइकलमा सवार रहेका दुई जनामध्ये एक जना फरार भएको उनको भनाइ छ।
मोटउनीहरु सवार युपी ५३ एच २०२८ भारतीय नम्बर प्लेटको मोटरसाइकल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। साथै उनीहरुले प्रयोग गरेको एक थान अटोमेटिक पेस्तोल र चेम्बरमा एक थान तथा म्यागजिनमा रहेको ३ थान गोली बरामद भएको उनले बताए।
मारिएका साहानी विगतमा तत्कालीन नेकपा माओवादीसँग आवद्ध थिए। त्यसपश्चात उनी जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा आजाद समूह (भूमिगत समूह) प्रवेश गरी चन्दा आतंकमा सक्रिय थिए।
राजनितिक दलमा आवद्ध हुनु अघि उनी सीमानाका क्षेत्रको तस्करीमा सक्रिय थिए। कपिलवस्तु जिल्लामा पनि दायर रहेको एक फौजदारी मुद्दामा प्रहरी नियन्त्रणबाट उनी फरार भएर भारत पुगेका थिए। उनलाई नेपाल प्रहरीले वर्षौदेखि मोस्ट वान्टेड सूचीमा राखेर खोजी जारी राखेको थियो।
साहानी उपर कर्तव्य ज्यान, बम विस्फोट, चन्दा–फिरौतीलगायत मुद्दा रहेका छन्। उनले २०७१ साल भदौ २८ गते भैरहवाका आकाश गुरुङ्गलाई अपहरण गरेका थिए। अपहरण गरेर परिवारसगँ एक करोड रुपैयाँ फिरौती मागेपछि परिवारले दिन नसक्ने बताउँदा नवलपरासीको बर्दघाट जंगलमा असोज ११ गते गुरुङको शव फेला परेका थियो। घटनामा संग्लन रहेका केही अभियुक्तलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अदालतमा अपहरण तथा कर्तव्य ज्यान मुद्दा दायर गरेको थियो।
कसरी भयो घटना ?
पछिल्लो समय प्रदेश ५ का जिल्लाहरुमा तस्करी बढेको खबरहरु आइरहेको थियो । प्रहरीले चोर–तस्करमाथि निगरानी बढायो, गस्ती टोलीहरु व्यापक परिचालन भएका थिए ।
शनिबार राति सिद्धार्थनगर–१०, शंकरापुरमा पनि गस्ती टोलीले आउने जाने सम्पूर्ण सवारी साधानलाई चेकजाँच गरिरहेको थियो । यूपी ५३ एच २०२८ नम्बरको प्लेट भएको मोटरसाइकल उनीहरु छेउ आयो, जसको गतिविधि अन्य सवारी साधानभन्दा भिन्न थियो । प्रहरी देखेपछि मोटरसाइकलको गति बढेको थियो ।
त्यहाँ खटिएका प्रहरीले रोक्न खोज्यो तर, आफूमाथि गोली प्रहार भएपछि जवाफ कारबाही गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । घटनामा घाइते भएका सहनीलाई अस्पताल लैजाने कोसिस गरिएको भएपनि बाटैमा मृत्यु भएको प्रहरीको दाबी छ ।
सहनीको अपराध यात्रा
अनुसन्धान अधिकारीहरु सहानीलाई प्रहरी मुठभेडमा मारिएका मनोज पुनभन्दा गम्भीर प्रकृतिको अपराधी मान्छन् । एक अनुसन्धान अधिकारी भन्छन्, ‘उनी कुख्यात अपराधी थिए ।’ प्रहरीको क्रिमिनल रेकर्ड सिस्टममा भएको अभिलेख अनुसार २३ असार ०६५ मा उनी कपिलवस्तुमा अटोमेटिक पेस्तोल र गोलीसहित समातिएका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले १५ भदौमा थुनामा राख्न कपिलवस्तु कारागार पठायो ।
तर, उनीसहित अपराधीहरुको एउटा समूह २ माघ ०६६ मा कारागारबाट सुरुङ खनेर भाग्न सफल भयो । त्यसयता प्रहरीले उनलाई खोजी रहेको थियो तर, उनी पक्राउ परको थिएनन् । उल्टै अपराधिक गतिविधि बढाउँदै लगिरहेका थिए ।
सशस्त्र समूह सक्रिय रहेका बेला उनी जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चा आजाद समूहमा आबद्ध भए । उनले रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी लगायतका क्षेत्रका व्यापारीलाई धम्क्याएर चन्दा असुली गर्न थाले । भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा बसेर नेपालमा अपराधको रजगज चलाउँदै आएका उनले २८ भदौ ०७१ मा सिद्धार्थनगर–८ का मेनपावर सञ्चालक आकाश गुरुङको अपहरणसमेत गरेका थिए ।
सहानीको समूहले १ करोड फिरौती माग गर्दै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएका दक्षिणी क्षेत्रका घर तथा होटलहरुमा गुरुङलाई लुकाएर राखेको थियो । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कोरिया बसेर फर्किएका गुरुङबाट ठूलो रकम हात पार्न सकिने उनीहरुको आश थियो । तर, प्रहरीले खबर पायो । गुरुङ एक पटक अपहरणकारीको कब्जाबाट उम्कन सफल पनि भएका थिए ।
अपहरणकारीले उनलाई समात्न सफल भए र, गोली हानेर गुरुङको हत्या गरियो । जसको भिडियो समेत बनाइएको थियो र सीडी परिवारलाई पठाइएको थियो । घटनाको ६ दिनपछि ११ भदौमा महेन्द्र राजमार्गको भूताहा बजारदेखि करिब ४ किलोमिटर उत्तरमा रहेको सामुदायिक वनमा नचिनिने अवस्थामा शव भेटियो ।
घटनामा संलग्न ५ जना पक्राउ परेका थिए तर, लामो समयसम्म सहानीको कनेक्सन खुलेको थिएन । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) बाट गएको टोलीले घटनामा जेलबाट भागेका सहानीको कनेक्सन भेटेको थियो । त्यसयता उनीमाथि विभिन्न अनुसन्धान अधिकारीहरुले निगरानी राखे पनि ट्रेस भएका थिएनन् ।
केही महिनाअघि गुरुङकी आमाले उनलाई देखेको भन्दै प्रहरीलाई खबर गरेकी थिइन् । तर, प्रहरीले यकिन गर्न सकेको थिएन । अन्ततः उनी शनिबार राति प्रहरीसँगको झडपमा मारिए ।
२०७५ पुष ३० गते प्रकाशित
सीके राउतले फेरे पार्टीको नाम, अब जनमत पार्टी दर्ता गरिने
ओली-प्रचण्डको ‘हत्या’ योजना बनेको हल्लापछि नेकपाले मुख खोल्यो, यस्तो रहेछ यथार्थ
राष्ट्रियसभा बैठकबाट ५ वटा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित
विप्लवको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउनु अराजनीतिक र अपरिपक्व निर्णय : डा.बाबुराम
पत्नीको उपचारसँगै राजनीतिक भेटघाटका लागि अमिरिका हानिए प्रचण्ड
टेलिभिजनबाट प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरको भन्दै युवती पक्राउ, के भनेकी थिइन उनले ?
राजेन्द्र श्रेष्ठलाई १४ संघसंस्थाले गरे सामूहिक सम्मान
अज्ञात मूहद्वारा आर्मी क्याम्पमै आक्रमण, सेनालाई ठूलो मानवीय क्षति
सरकारी स्कुलको छेउमै निजी स्कुल खोल्न लागिएको भन्दै भकुन्डेका स्थानीय विरोधमा
गरिबका झुपडीमा साहुले जबर्जस्ती लगाएको ताला विप्लवका कार्यकर्ताले तोडेपछि
प्रतिबन्धबारे विप्लवको आधिकारीक धारणा बाहिरियो- अबको कारवाही केपी-बादल कम्पनीमाथि (विज्ञप्ति)
नेकपालाई बदनाम गराउन कैलालीमा जन्तीबस जलाएको हल्ला, यस्तो रहेछ यथार्थ
नेकपाको बन्दले काठमाडौंसहित देशभरको जनजीवन ठप्प, १० तस्वीरसहित
नेकपामाथिको प्रतिबन्धले ओली-प्रचण्ड सरकारको अत्यको सुरुवात -कन्चन
नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएर सरकारले फासिस्ट चरित्र देखायो- बैद्य
विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय कसको थियो, बादल-प्रचण्ड कि ओली ? यस्तो छ भित्रि रहस्य
विप्लवबिरुद्ध ओली सरकारको खतरनाक निर्णय
कावासोतीमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि नै बम बिस्फोट, अन्य कहाँ-कहाँ भयो विस्फोट, ताजा बिबरण
दुई हजार बर्ष यताकै सबैभन्दा बढि तात्यो पृथ्वी, यसो भन्छन् बैज्ञानिक
नेकपा पोलिटब्युरो सदस्य जीवन्त ललितपुरबाट गिरफ्तार
ओली सरकारले संकटकालको झल्को दिएको भन्दै विप्लवले गरे चरणबद्ध संघर्षको घोषणा
एनसेलको मुख्यालयमा शक्तिशाली बम बिस्फोट, २ जना घाइते, यस्तो छ थप बिबरण
हेलिकोप्टर घट्नास्थलमा अहिले पनि किन घुमिरहेको छ सेनाको टोलि, यस्तो छ कारण
शिबगढी घटनाबारे नेकपाले मुख खोल्यो, आफ्नै हतियार थमाएर प्रहरीले फसाउन खोज्यो- वीरजंग
नेकपाको युवा दस्ताले लियो बसुन्धरा बम बिस्फोटको जिम्मा, खुल्यो गुरुङमाथि कारवाही गर्नुको रहस्य
आफु जिउँदो रहेको स्पष्टीकरण दिँदादिँदा हैरान भए व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पा
विप्लवको गाउँमा प्रहरीमाथि ढुंगामुढा, स्थानीयले प्रहरीलाई यसरी लखेटे